FONGOTRA NY LEFAKOZATRA : Manaporofo ny fanjakana | déliremadagascar
Nahazo fampiofanana ireo tomponandraikitra mpanara-maso ifotony ny aretina voatsabo amin’ny alalan’ny vaksiny (SMEV). Nohamafisina ny fahaiza-manao efa hananan’izy ireo. Nandritra ny telo andro, nanofana ireo tomponandraikitra (point focal) avy amin’ny distrika manerana an’i Madagasikara ny fianakaviambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS). Nanomboka tamin’ny 07 ary nifarana ny 09 martsa 2018 teny amin’ny Live Hotel Andavamamba ny atrika asa.
Ao anatin’ny fanomanana ny antontan-taratasy ahazoana ny taratasy fanamarinana fa fongotra ny aretina lefakozatra eto Madagasikara izao fampiofanana izao. Ny vaomieram-paritra misahana fanamarinana ny famongorana ny lefakozatra eto Afrika (CRCA) no hanome io fanamarinana io amin’ny volana jona ho avy izao. Miezaka mafy ny vaomiera nasionaly amin’ny fanaporofoana fa efa fongotra ny lefakozatra eto Madagasikara. Amin’ny alalan’ny “point focal” no hanamarinana izany. “Izahay no manaramaso ny fanaovam-baksiny sy ny fisian’ny trangana aretina azo tsaboina amin’ny alalan’ny vaksiny toy ny lefakozatra, kitrotro, tetanosy… eny amin’ireo toeram-pitsaboana iombonana”, hoy ny dokotera mpanara-maso ifotony ny aretina voatsabo amin’ny alalan’ny vaksiny ao amin’ny distrika Marovay, Leka Stil. Raha sendra misy trangana aretina ahiahiana toy ny fahalemen’ny zaza tampoka, alefa any amin’ny “Institut Pasteur” ny dikin’ilay zaza hohamarinina na voan’ny lefakozatra izy na tsia. Nambaran’ny dokotera Leka fa nisy tranga roa noahiahiana ho lefakozatra tamin’ny taona 2017. Rehefa natao anefa ny fitiliana dia tsy izy izany.